Maleeshiyaadka Xasan Culusoow | allsanaag
Maleeshiyaadka Xasan Culusoow
Maleeshiyaadkii Beelaha Hawiye oo ku noqday Isbaarooyinkii ay Muqdisho hore ugu lahaayeen.
Maleeshiyaadkii beelaha Hawiye ee sideedii sano ee ugu danbaysay loogu yeeri jiray Ciidanka qaranka Soomaaliyeed, ayaa dib ugu laabtay Isbaaro beeleedkii ay horay ugu lahaayeen magaalada Muqdisho,
Maleshiyaad aad u hubeesan , ayna ka muuqato in lasoo abaabulay ayaa xiray wadooyin badan oo kuyaala magaalada Muqdisho, maleeshiyaadkan ayana gaadiidka kala duwan u diiday in ay maraan wadooyinka u xiran.
Wararka ayaa sheegaya in maleeshiyaadkan oo wata gaadiidka dagalaka iyo hub badan ay isugu soo baxeen Wadooyinka Muqdisho qaarkood.
Maleeshiyaadkan beesha Hawiye, ayaa xiray Wadada KM-4 ilaa Isgooska Banaadir, waxa ay sidoo kale ciidamada gaadiidkooda dagaalka iyo dhagxaan ku xireen wadooyin kale oo kuyaala magaalada Muqdisho oo muhiim u ahaa isku socodka dadka iyo gaadiidka.
Khuburo ay la hadashay Watbaahinta ayaa sheegay inay arintani ay la mid tahay tii Faroole uu ka sameeyey magaalada Garowe ee Caasimadda Puntland, ayna Ciidanka soo abaabuleen Kooxda Damul Jadiid ee Xasan Sheekh iyagoo ka leh Qaskan iyo Qalalaasahan dano Siyaasadeed oo u gaar ah
← Lacagtii Musharaxiinta Isbaaraddii Garowe taaalay oo la qaaday →